खसी-कुखुरा जस्तै गाई काट्न थालिए के होला ? |
25 March, 2018 | Bhawana Pathak | 9415 Views | comments
केही दिनयता नेपालमा गाईको विषयमा निकै चर्काचर्की बहस सुरु भएको छ । यसलाई आ-आफ्नो किसिमले रक्षा र प्ररिक्षा अनि अति तल्लोस्तरका टिप्पणी गर्ने गरेका छन् । एकजना जिम्मेवार ओहदामा बसेका भनिएका व्यक्तिले गाई काट्ने कानुन बनाउनुपर्छ भनेको भन्दै समाचारहरु आएपछि यो विषय अर्कैतिर मोडिने डर पैदा भैसकेको छ ।
नेपालमा गाई पालन केवल दूध, मलका लागि हुन्छ । पश्चिममा मासु खानका लागि हामीले कुखुरा, सुंगुर, बंगुर पालेजस्तै गर्छन् । उनीहरु पनि दूधका लागि र मासुका लागि अलग अलग नश्लका गाई पाल्छन् । अब हामी विचार गरौं, घरमा दूध दिइरहेको गाई काटेर खानु अधिकार हो कि के हो ?
गाईलाइ पूजा गर्ने हिन्दु र गाईको मासुखाने समुदायका मानिसहरुबीच अहिले जसरी सामाजिक संजालमा आइलाग्ने र जाइलाग्ने काम भैरहेको छ यसले साम्प्रदायिक सदभाव नैखल्बलिने त हैन भन्ने चिन्ता व्यक्त भैरहेको छ । खानेले खालान्, विगतमा पनि त्यस्तो चलन
थियो, तर खानुअघि गाईँ काटेर, मासु भाग लगाउँदै गरेका फोटो किन सार्वजनिक गर्नु ?
बजारमा खसी कुखुरा काटेर मासु बेचे जस्तै गाई काट्न थालियो भने त्यसले कस्तो परिस्थिति सिर्जना गर्ला ? यसैका कारण जातीइ र धार्मिक द्वन्द्व बढदैन भनेर ग्यारेन्टी कसले लिने ? परम्परा जे छ त्यसलाई जसरी मानिदै र मनाइँदै आइएको छ त्यसै गरी चलिरहन दिने कि विवादको विषय बनाएर विदेवेष फलाउने ? सोचनीय विषय यो मात्रै हो ।
भन्नेले तिमीहरु गाईको मुत खाओ, हामी मासु खान्छौं भन्दैछन् । यो आक्रोश बाहेक केही हैन । गाईको शरीरबाट निसृत हुने हरेक कुरा मानव र प्रकृतिका लागि लाभदायक छ । दूधको त कुरै नगरौं । गहुँतमा यति ठूलो औषधीय शक्ति हुन्छ कि हामीले गाईको मासु खाने कि दूध मुत्रसेवन गर्न भन्नेयसपछि सोच्नैपर्छ ।
गाई धार्मिक हिसाबले हिन्दुहरुले लक्ष्मीको रुपमा पूज्नुको वैज्ञानिक कारण सार्वजनिक भैसकेको छ । गाईको मासु खाएर हैन, उसलाई पालेर मानिसको जीवन सहज हुन्छ भन्ने प्रमाणित भएको छ । गोमुत्रमा रोगव्याधी हटाउने शक्ति हुन्छ भन्ने पश्चिमी देशका वैज्ञानिकहरु यसो भनिरहँदा पश्चिमी मिसनरीका अभियानकारीहरु भने नेपालमा गाई संस्कृति मासेर उनीहरुको संस्कृति लाद्न खोज्दैछन् र उचाल्दैछन् सोझा सिधा जनतालाई ।
– गौमुत्रसर्वोत्तम औषधीको रुपमा लिइन्छ । यसको सेवनले कतिपय रोग समेत निर्मूल हुन्छ । यद्यपी स्वस्थ्य गाईको गौमुत्र सेवन गर्नुपर्छ । स्थानिय जातका गाई अझ खुला चरनमा छाडिने गाईको गौमुत्र, दुध बढी औषधिय महत्वको हुन्छ ।
– गौमुत्रमा यस्ता गुण हुन्छ, जसले क्यान्सर जस्ता रोग लाग्न दिदैन । चिकित्सा विज्ञान अनुसार गाईको कलेजोलाई चार भागमा बाढिन्छ । यसको अन्तिम हिस्सामा एक प्रकारको एसिड हुन्छ, जो क्यान्सर रोगको जड हटाउने क्षमता राख्छ । गौमूत्र खाली पेट प्रतिदिन निश्चित मात्रामा सेवन गर्दा क्यान्सर जस्तो रोग नष्ट हुन्छ ।
– गौमुत्रमा पोटेशियम, सोडियम, नाइट्रोजन, फस्फेट, यूरिया, यूरिक एसिड हुन्छ । दुध दुइरहेको समयमा गौमुत्रमा ल्याक्टोजको मात्रा वृद्धि हुन्छ, जो हृदय रोगीको लागि फाइदाजनक मानिन्छ ।
– गौमूत्रमा नाइट्रोजन, सल्फर, अमोनिया, कपर, फलाम, युरिक एसिड, युरिया, फस्फेट, सोडियम, कार्वोलिक एसिड, क्याल्यसमि, भिटामिन आदि पाइन्छ ।
– गौमुत्रमा प्रति अक्सिकरणको क्षमताको कारण डीएनए नष्ट हुनबाट बचाउँछ । गोमूत्रबाट बनेको औषधीले क्यान्सर, उच्च रक्तचाप, आर्थराइटिस, सर्वाकल हड्डी सम्बन्धी रोगको समेत उपचार संभव हुन्छ ।
त्यसै गाईलाई नेपालको राष्ट्रिय जनावर मानिएको हैन । पौराणिककालदेखि गाईलाई त्यसै पूजा गरिएको हैन । ऋषिमुनिहरुले हजारौंहजार वर्षअघि पत्ता लगाएको कुरा आज विज्ञानले पुष्टि गरिसक्यो । हामी किन गाईका विषयमा अनेक विवाद निकालेर राष्ट्रिय एकतालाई भत्काउन लागिपर्ने ?
बाहिरी वातावरण किटाणुरहित बनाउन घर वरिपरी गोमुत्र छर्कने गरिन्छ । अन्नबालीमा लागेको किरा हटाउन गोमुत्र छर्किने चलन गाउँघरमा छ । गाई काट्न पाउनपर्छ भन्नेले पनि यसो गरेकै होलान् । त्यस्तै गोबरमा पनि त्यही शक्ति हुन्छ । जुन जनावरको दिसा पिसाव नै यति उपयोगी छ भने यसको दूध कस्तो होला ? गाईको दूधमा स्वर्णतत्व पाइन्छ । यो वैज्ञानिकहरुले भनेको कुरा हो ।
नेपालको संविधान २०७२ ले गाईलाई राष्ट्रिय जनावर मानेको छ । राष्ट्रिय जनावरको बध गरिंदैन, गरे कारबाही हुन्छ । तर नेपालमा यस्तै भैरहेको छ र संविधानले निषेध गरेको कुरा गर्न पाउनु आफ्नो अधिकार भएको भ्रम फैलाइएको छ । जनआन्दोलन २०६२।०६३ को सफलतापश्चात खुलेआम गौबधको शृङ्खला बढ्दै गयो । अहिले अधिकारका नाममा ओमकार परिवारले मान्दैआएको सनातन धर्मावलम्बीहरुको अस्तित्वमाथि धावा धाला बोल्न अधिकारको जलप लगाइयो
नेपालमा गाईको मासु खानेहरु नभएका हैनन्, विभिन्न जातजातिले गाई खान्छन् । अनि गाई मार्नेहरूले यसलाई आफ्नो अधिकार भन्ने गरेका छन् । यसो भन्दैमा संविधानले निषेध गरेको कुरा गर्नु अपराध हो, गैरकानुनी हो । राष्ट्रिय जनावर गाई काटेर खान पाउनुपर्छ भन्नु संविधान विपरीतको काम हो ।
धार्मिक मान्यताका आधारमा गाईलाई हिन्दु धर्मावलम्बीहरूले लक्ष्मीको रुपमा पूजा गर्ने गर्दछन् । यसको अर्थ गैरहिन्दुहरूले धर्म निरपेक्षताकै आधारमा अरुको आस्थामा प्रहार गर्नु नै अधिकार स्थापित गर्नु हो भन्ने मान्यता राख्ने हो भने मुलुकमा कहिल्यै सहिष्णुता कायम रहँदैन । यो बडो गम्भीर र विचारणीय पक्ष हो । जातीय राजनीतिका पक्षपोषकहरू गाई मारेर खान पाउनुपर्छ भन्दै आइरहेका छन् । कतिपयको संस्कृति र परम्परामा त्यो छुट छ तर यसो भन्दैमा संविधानले निषेध गरेको कुरा किन गर्ने ?
#खसी-कुखुरा जस्तै काई काट्न थालिए के होला ?